देशको बिकास हुन नसकेको कारण के हो ? - राष्ट्रखबर
राजनीति देशको बिकास हुन नसकेको कारण के हो ?
देशको बिकास हुन नसकेको कारण के हो ?
July 18, 2021 rastrakhabar 0
अव राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु इमान्दार बन्नु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । नेताहरु इमान्दार भएनन् भने देश बन्न सक्दैन । सवै भन्दा ठूलो कुरा के हो भने इमान्दारीता हो । हाम्रो देशमा नेताहरु इमानदार र पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । जसले जे सुकै भनोस् अहिले पहिला जस्तो निष्ठाको राजनीति छैन । अव नेताहरुको आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन आउन जरुरी छ ।
जनताले सधै दुःख पाइराख्ने, नेताहरु रातारात धनी बन्दै जाने यो स्थिती छ । यसरी देशको भबिश्य निर्माण गर्न सकिदैन । अव गम्भिर भएर सवैले सोच्ने बेला आएको छ । जनताको बिश्वास माथि कसैले पनि खेलवाड गर्ने काम गर्नु हुदैन । जनताको विश्वास जित्न इमानदारीता, पारदर्शीता र निष्ठाको राजनीति चाहिन्छ ।
निष्ठाको राजनीतिले नै देशको भाग्य र भबिश्य निर्माण गर्न सक्छ । देशलाई बिकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन इमान चाहिन्छ । कुराले मात्र देश बनाउन सकिदैन । राजनीति भनेको समाजसेवा हो । जनताको सेवाका लागी राजनीति गरिन्छ । तर नेपालमा राजनीतिलाई ब्यापार बनाइएको छ । यसरी हुदैन । चित्त दुखेको कुरा यो हो ।
देश बिग्रिएको छ । यो देशलाई बनाउन सवै जुटनु पर्ने आबश्यकता छ । देशको बिकास हुन नसकेको कारण के हो ? यसको खोजी गर्नु पर्ने जरुरी छ । समाजको बिकास नभइ देशको बिकास हुन सक्दैन । यो सवैले बुझेको कुरा हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु सवै भन्दा पहिला इमान्दार हुनु पर्छ । इमानको राजनीतिले नै देश अघि बढछ । इमानको राजनीति भनेको के हो ? यो बुझन जरुरी छ । जनविश्वासमा आधारित बनेर गरेको राजनीति टिकाउ र दिगो हुन्छ ।
अझै पनि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु देश प्रति संवेदनशील बन्न सकेनन् । अनि देशले कसरी प्रगति गर्छ ? देश बनाउन निष्ठाको राजनीति चाहिन्छ । खै के कारणले हो, राजनीति दूषित बनेको छ । पछिल्लो समयमा आएर नेताहरु आफनो ब्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति गरिरहेका छन । सेवा भावनाले अभिप्रेरित भई राजनीतिमा समर्पित रहने व्यक्ति निष्ठावान् हुन्छन् । कसैले राजनीतिलाई आर्जनको पेसा बनाउने गरेका छन ।
त्यस्तो उद्देश्य लिएर राजनीतिमा लागेका व्यक्तिले नै राजनीतिलाई दूषित बनाएका छन । दूषित राजनीतिक प्रवृत्ति पनि दिनानुदिन फैलँदो अवस्थामा छ । पटक पटक सरकार बनाउने र गिराउने खेलले जनता वाक्क दिक्क छन । कतिपय निष्ठावान् व्यक्ति पनि दूषित राजनीतिकै वातावरणको कारण प्रभावित बन्न पुग्छन् । स्वार्थी प्रवृत्ति नेताका निम्ति लाभ र उत्साहजनक भए पनि जनताका लागि भने घातक बन्दै आएको छ ।
लोकतन्त्रमा निष्ठाको राजनीतिले आमनागरिको भावनालाई सम्बोधन गर्छ । दलहरूले निष्ठाकै राजनीति गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नागरिकलाई आकर्षित गर्ने भनेको निष्ठाको राजनीतिले हो । क्षणिक लाभ र स्वार्थको राजनीति गर्ने अवसरवादी व्यक्ति नै यति बेला राजनीतिक वृत्तमा अगाडि छन । तिनीहरुलाई जनताले चिनेर बसेका छन । तिनीहरुले देश र जनताको पक्षमा केहि सोच्दैनन् । त्यसैले निष्ठावान् नेताहरु यो देशले खोजेको हो ।
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा भीडभाड बढ्यो, खोप नलगाएका उच्च जोखिममा
समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघद्वारा श्रमिकलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण
हेर्नु होस् आज कस्तो रहनेछ देशभर को मौसम
मन्त्रि बाडफाड को कुरा ले आतंकित भएको छु : प्रचण्ड
थप ३ हजार १ सयबढीमा कोरोना पुष्टि,१६ को मृत्यु
कोरियोग्राफर अश्विनी झा फेशन डिजाइनर काउन्सिल अफ नेपालको सल्लाहकारमा नियुक्त
विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता
लागुऔषको कारोबारस्थलमा सलमान खानसहित ३ जना पक्राउ
कोरोना संक्रमित बढेपछि अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा संकटकाल
आजदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन
गुरुजनप्रति सम्मान प्रकट गरी आज गुरु पूर्णिमा मनाइँदै
भारतमा एकैदिन थपिए ३९ हजार कोरोना संक्रमित, ३५ हजार निको
प्रदिप तिवारी तरुण विभाग डेनमार्क शाखा प्रमुखमा नियुक्त
प्रकाश शाहिको ‘मेरो नाचो तीज’ गीतको भिडियो सार्वजनिक(भिडियो)
‘जिम्माल बा को छोरो’ इन्दिरा र रमेशको आवाजमा
चीनबाट थप ८ लाख डोज खोप आइपुग्यो
थप २७ सय १४ जनामा कोरोना पुष्टि, १२ सय ८८ निको
राजनीतिलाई पेशा भन्दा जनताको हितमा अघि बढाउनु पर्छ –राजन खड्का
मिस क्विन ग्लोब ईन्टरनेसनल टिनतर्फको ताज नेपाली सुन्दरी आश्मा दुलालले हात पारिन
राज खड्का ‘मिस्टर ग्लोबल टिन २०१८’ को टप ५ मा पर्न सफल
यौनशोषणको आरोप लागेका बलिउड निर्देशक अनुराग कश्यप पुलिस स्टेशनमा
भेरिएन्टसँग मिल्दोजुल्दो भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढ्यो
नेपाललाई ट्रान्जिट बनाउने विदेशीको कोरोना परीक्षण गरे प्रयोगशालालाई कारवाही
मध्य तराइकै पहिलो रेडियो, रेडियो वीरगंज ९९ मेघाहर्जको १५ औं बार्षिक उत्सव सम्पन्न
दोलखामा केन्द्रविन्दु बनाएर ५.२ रेक्टर स्केलको पराकम्प
संचारकर्मी सबिता पोख्रेलको “बिरानो भो माइतिको आगनी” बिमोचन (भिडियो सहित)
जेष्ठ २६ गते “मिस गुरुङ इन्टरनेसनल सिजन टु” को अडिसन काठमाडौमा
भारतमा १ करोड बढीमा कोरोना पुष्टि, विश्वभर संक्रमितको संख्या ७ करोड ७६ लाख
Chandra Lal Maharjan President2no wada tole sudhar samiti,lazimpat on समाजसेवी राजेश महर्जनद्वारा २०० परिवारलाई राहत वितरण
D M Shrestha on गुन तिर्न नूनको खेल,जनताको स्वास्थ्य माथी झेल
Airflow on “त्यो मन” लिएर आउदै गायक राजन श्रेष्ठ
Bickram babu uprety on कोरोना संकट रहेसम्म स्वास्थ्य सेवा मात्र होईन, खाद्यान्न सहयोग पनि निरन्तर गर्नेछु : डा. रेणु शर्मा
Shreekrisshna paudel on कोरोना संकट रहेसम्म स्वास्थ्य सेवा मात्र होईन, खाद्यान्न सहयोग पनि निरन्तर गर्नेछु : डा. रेणु शर्मा
Tarsha Gavilanes on फाल्गुन ३० मा ‘आर्टिष्ट नेपाल फेसन रनवे एण्ड म्युजिकल नाईट’ शो हुने, १२ मोडलहरुको रया्म्पको साथमा चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुती रहने
Copyright © 2021 राष्ट्रखबर. All rights reserved.